အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်စာဖတ်ခြင်း သို့ အမှိုက်ထဲကရွှေ | Myanmar Tech Press
အင်တာနက်ကို အမှောင်ချထားတဲ့ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခု လို့တင်စားချင်ပါတယ်။ လိုချင်စရာ ပစ္စည်းတွေအပြည့်ရှိနေတယ် ဒါပေမယ့် မှောင်မဲနေလို့ အကောင်း အဆိုး ၊ အသုံးဝင် ၊မဝင် ဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်ဖို့ ခက်ခဲစေပါတယ်။ ဒီအထဲက အသုံးဝင်နိုင်မယ့် ကိုယ် လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လိုချင်ရင် သင်ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တဲ့ အလင်းတစ်ခု သင့်မှာရှိနေမှ ရနိုင်မှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် အင်တာနက် မှတစ်ဆင့် ပညာရပ်တွေလေ့လာသင်ယူမယ် ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိူးရလဒ်တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မှာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ် သိမြင်နိုင်တဲ့ အသိ ၊ အသုံးချနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဉာဏ် ၊ အသိနဲ့ ဉာဏ် ကို Balance ဖြစ်အောင်ထိန်းညှိ ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ခဲ့ရင် သတင်းအချင်အလက် အမှားအယွင်း တွေ အလိမ်အညာတွေကြားမှာ အချိန်ကုန် လူပန်းဖြစ်ကာ ဆုံးရှုံးနစ်နာမူတွေ နဲ့အတူ မျောလွင့်သွားနိုင်ပါတယ်။ အချို့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဟာ အင်တာနက်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ လူမူကွန်ယက် စာမျက်နှာ Facebook နှင့် စာတိုနှင့်အသံဖိုင်တွေ ပေးပို့မျှဝေနိုင်တဲ့ Messaging App Viber တို့ကိုသာ မြင်ကြသုံးကြပါတယ်။ Facebook နဲ့ Viber ဟာ အသုံးချပညာရပ်တွေ၊ တိကျခိုင်မာတဲ့ အချက်အလက်တွေရယူနိုင်တဲ့ နေရာတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိပြုဆင်ခြင်ရပါမယ်။ လူမူကွန်ယက် တွေဟာ အမုန်းစကား၊ အတင်း အဖျင်း နဲ့ အလွန်အမင်းချဲ့ကားပြောဆိုနေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်အမှားတွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်လို့ လူမူကွန်ယက် စာမျက်နှာတွေကို အလွန်အမင်း စွဲလန်းစွာ အသုံးပြု နေမိတယ်ဆိုရင် လျှော့သင့်ပါတယ်။
လူမူကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေ အလွန်အမင်းအသုံးပြုနေမိတဲ့ အချိန် စုစုပေါင်းရဲ့ တစ်ဝက်ကို စာဖတ်ကြည့်ကြရအောင်လားခင်ဗျာ။ အမှားအမှန်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရုံမကပဲ လက်ရှိဘဝနေထိုင်မူ ပုံစံထက်ပိုကောင်းတဲ့ ဘဝနေထိုင်မူ ၊ အတွေးအခေါ်တွေ့ ရနိုင်လို့ စာဖတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရအောင်ပါ။
ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီးရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ အနာဂါတ်ရည်မှန်းချက်တွေ အကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့အခါ လူငယ်တွေစာမဖတ်ဘူးလို့ အများစု ကပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါအမှန်ပဲလား။ မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေ စာဖတ်မှု အခြေအနေတွေကိုခန့်မှန်းသိမြင်နိုင်ဖို့ စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းကို စာအုပ်စာပေများ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ရောင်းချပေးနေတဲ့ We Distribution ဆိုတဲ့ စာပေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေး က အသေးစားစစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းကို We Distribution မှစာအုပ်ဝယ်ယူ သူတွေအများထဲကမှ အယောက် ၅၀၀ ကိုကျပန်းရွေးချယ်ကာ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ We Distribution မှစာအုပ်ဝယ်ယူ သူတွေအပေါ်မှာသာ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တဲ့အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအပေါ် လွမ်းခြုံနိုင်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ နီးစပ်မှန်ကန်မူ ရနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ယူမူ ရဲ့ ရလဒ်အဖြေတွေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလာ ၂၁ ရက် မှာ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၁။ ရန်ကုန် ၄၂% ၂။ မန္တလေး ၁၆% ၃။ စစ်ကိုင်း ၇% ၄။ မကွေး ၆% ၅။ ရှမ်း ၆% ၆။ ဧရာဝတီ ၅% ရ။ ပဲခူး ၄% ၈။ ရခိုင် ၃% ၉။ မွန် ၃% ၁၀။ တနသာင်္ရီ ၂% ၁၁။ ကချင် ၂% ၁၂။ နေပြည်တော် ၂% ၁၃။ ကရင် ၁% ၁၄။ ကယား ၁% ၁၅။ ချင်း ၁% တို့ဖြစ်ပြီး…
ကျား ၊ မ စာအုပ်ဝယ်ယူမူအခြေအနေ စစ်တမ်းတွင်….
မ -၄၀% တို့ပဲဖြစ်ကာ…
အဓိကထား လူအများ စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တဲ့ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြား စစ်တမ်းတွင်….
၁။ ၂၁ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်ကြား ၄၄%
၂။ ၂၆ နှစ်မှ ၃၀ နှစ်ကြား ၂၄%
၃။ ၁၆ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်ကြား ၁၇%
၄။ ၃၁ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်ကြား ၇%
၅။ ၃၆ နှစ်မှ ၄၀ နှစ်ကြား ၄%
၆။ ၄၁ နှစ်မှ အထက် ၄% ဆိုတဲ့ ရလဒ်တွေဖြင့်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့မှာစာဖတ်ဖို့ အားပေးစကားပြောခဲ့ပြီးပြီ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အတူစာဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ဟုတ်ပြီ အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် စာအုပ်တွေ ဖတ်နိုင်လား။ ဘယ်လိုဝယ်ယူဖတ်ရူကြမလဲ
အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် သုတရသ စုံလင်တဲ့စာအုပ်တွေ ဝယ်ယူဖတ်ရူနိုင်တဲ့ ဝန်ဇင်း (Wun Zinn) ဆိုတဲ့ application လေးတစ်ခုအကြောင်း သတင်းစကားပါးလိုက်ပါတယ်။ ဝန်ဇင်း ကို Bagan Innovation Technology ကနေပြီး ၂၀၁၃ နှစ်မှ စတင် ထုတ်လွှင့်ဖြန့်ချီခဲ့တာပါ။ အသုံးပြုသူအရေအတွက် ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလရဲ့ ပထမ လပါတ်အတွင်းမှာပဲ အရေအတွက် (၁) သန်းပြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေအနေ ရလဒ်တွေနဲ့အတူ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များစွာ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ဝန်ဇင်း ဟာ စာရေးဆရာ နှင့် ထုတ်ဝေသူပေါင်း ၆၀၀ ကျော်နှင့်အတူ လက်တွဲ လုပ်ကိုင်လည်ပါတ်လျက်ရှိနေပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ စာအုပ်ပေါင်း (၄၀၀၀) ကျော်ရှိနေသည့်အပြင် မဂ္ဂဇင်း၊ ကာတွန်းနှင့် Audio book (အသံသွင်း ဝတ္ထု) တွေဖြင့် ဝန်ဆောင်မူ ပေးနေသည့်အပြင်၊ လူငယ်တွေအကြား ရေပန်းစားလူကြိုက်များလှတဲ့ ဂျပန်ကာတွန်း (Manga) စာအုပ်တွေကိုလည်း မြန်မာဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မူအပိုင်းတွင် အခမဲ့၊ အပိုင်ဝယ်ယူဖတ်ရူခြင်းနှင့်ငှားရမ်း ဖတ်ရူခြင်းဆိုပြီး အမျိုးအစားခွဲခြားထားပါတယ်။ အပိုင်ဝယ်ယူဖတ်ရှု မှုအပိုင်းမှာ ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း (၅၀၀) ကျပ် ကနေ (၈၀၀) ကျပ်ဝန်းကျင် ဖြင့်ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က စာအုပ်တွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး အခြားဖုန်းသစ်တစ်လုံးကို ပြောင်းလည်းသုံးစွဲခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဇင်း Account ကိုပြန်လည် Login ဝင်ကာ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေကို တစ်စုံတစ်ရာ ဆုံးရူံးမူ မရှိပဲပြန် Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အငှား ဝန်ဆောင်မူမှာတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ငှားရမ်းခ (၅၀၀) ကျပ် + အခွန် ၅% ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး (၁၄) ရက်ကြာဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။
Application မှတစ်ဆင့် စာအုပ်ဝယ်ယူဖတ်ရူ ရာတွင် လူအများဒွိဟပွားနေတဲ့ အချက်လည်းရှိပါတယ်။ အစမ်းအရင်ဖတ်ကြည့်လို့ ရနိုင်ရဲ့လားဆိုတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အပြင်စာအုပ်ဆိုင်တွေ မှာစာအုပ်ဝယ်သလိုပဲ အမြည်းဖတ်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုမဝယ်သေးခင် Sample Download ရယူပြီး အမြည်းဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သုတရသ စာအုပ်တွေအပြင် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ ၊ အပါတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ် ၊ လစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်း တွေလည်း ဝယ်ယူရနိုင်ပါသေးတယ်။ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာအနေနဲ့မဇ္ဈိမနှင့် The Voice Daily တို့ကို ရနိုင်ပါတယ်။ အပါတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်စုစုပေါင်း (၆) ဆောင်ဝယ်ယူရှိနိုင်သည့်အနက် (၂) ဆောင်ကတော့ အားကစားဂျာနယ် တွေဖြစ်ပါတယ်။ လစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်းပေါင်း (၄၀) အုပ်ဝယ်ယူ ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။ လျှိူ့ဝှက်ဆန်းကြယ်မဂ္ဂဇင်း အမျိူးစားဖြစ်တဲ့ (၁) သည်းထိတ်ရင်ဖို (၂) ဂမ္ဘီရလောက (၃) ဆဠမအာရုံ (၄) လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်
Fashion မဂ္ဂဇင်း အမျိူးအစားတွေဖြစ်တဲ့… (၁) The Faces (၂) MODA (၃) Hair & Style (၄) ရတီ (၅) Beauty Secretes (၆) Look (၇) POSH (၈) Fashion (၉) NOW! (၁၀) XPRESS (၁၁) LifeStyle (၁၂) Like Creative (၁၃) ART Monthly
(၁) Eternal Light(၂) ရွှေအမြုတေ (၃) ကလျာ (၄) မဟေသီ (၅) အပျိုစင် (၆) Peace (၇) မိုးမခ (၈) သုခုမ (၉) Shape နှင့် (၁၀) ဂျာနယ်လစ်(စ်)..
ကျမ်းမာရေးနှင့် Life Style မဂ္ဂဇင်းအမျိူးအစား တွေဖြစ်တဲ့ (၁) Food (၂) Living Fashion (၃) ဇီဝက (၄) Health Guide (၅) Parami Healthy (၆) Healthy For All (၇) Family Life (၈) Celebrity Cooking ..
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားဖြင်းထုတ်ဝေသည့် မဂ္ဂဇင်းတွေဖြစ်သည့် …
(၁) Frontier Myanmar (၂) Mizzima (၃) My Magical Myanmar (၄) Thura Swiss Newsletter နှင့် (၅) The Irrawaddy စသည်တို့ကို အမျိုးအစား စုံလင်စွာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။
Wun Zinn application ကို Android ဖုန်းတွေအတွက် Google Play Store နှင့် iphone (ios) ဖုန်းတွေအတွက် App Store တို့တွင် အခမဲ့ Download ရရယူနိုင်ပါတယ်။
Wun Zinn application အစုံးပြုပုံကို ပုံလေးတွေနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Image Source: http://www.wunzinn.com/manual
Myanmar Tech Press ရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်အားလုံး နည်းပညာကို အကောင်းဆုံးအသုံးချကာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝတက်လမ်း ၊ ဘဝနေထိုင်မူ တွေရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
← နည်ပညာနဲ့ဖျော်ဖြေရေး လောကထဲက Netflix
မြန်မာခရီးသွားများအတွက် Airbnb →